Baolina kitra – FMF : Ahemotra ny fifidianana ny filoha
Na dia miezaka mafy amin’ny fanondrotana ny kitra malagasy aza ny teknisianina sy ny mpilalao eny ambony kianja, manimba sy manahirana ity fanatanjahantena ity kosa ny fitavozavozana eo amin’ny resaka fitantanana. Raha tokony hotanterahina ny …Tohiny
Zava-boahary ary vakoka mampiavaka an’i Madagasikara. Toa ny isan-taona, dia hotanterahina ny zoma 05 oktobra izao ny andiany faha-5 amin’ny « Dihin’ny varika maneran-tany », na ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny gidro. Ankoatra …Tohiny
Vaovao nanaitra ny maro androany, ny filazana fa tsy mifanaraka amin’ny fenitra iraisam-pirenena ny fahazoan-dalana hitondra fiara biometrika sy ny “carte grise” biometrika, ka tsy maintsy hosoloina. Io no nambaran’ny tale jeneraly eo anivon’ny minisiteran’ny …Tohiny
67ha : Olona efatra nahatrarana héroïne
Tsy misy fitsaharana. Nangina kely indray ny an’ny teratany vahiny amin’ny trafikana “héroïne”, dia manao io afera io ihany koa ny teratany malagasy. Lehilahy miisa telo, ary vehivavy iray no nosamborin’ny polisy misahana ny ady …Tohiny